Olona 8 no maty tamin'ny fifanosehana tamin'ny fampisehoana hip-hop Houston
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Etazonia Vaovao Vaovao » Olona 8 no maty tamin'ny fifanosehana tamin'ny fampisehoana hip-hop Houston
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Kolontsaina • Entertainment • Vaovao momba ny fahasalamana • Music • Vaovao • People • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Olona 8 no maty tamin'ny fifanosehana tamin'ny fampisehoana hip-hop Houston.
Ny olana momba ny fiarovana dia nampanahy na dia talohan'ny nanombohan'ny hetsika aza. Nitatitra ny fampahalalam-baovao ao an-toerana fa olona marobe no voahitsakitsaka taorian'ny fanafihana an-jatony tao amin'ny kianjan'ny NRG, nanosika ireo sakana fiarovana, nandika ny vakim-paritra talohan'ny nanombohan'ny fampisehoana ary nandrava ireo mpitsikilo metaly.
Olona maro no voahitsakitsaka taorian'ny fanafihana an-jatony tao amin'ny kianjan'ny NRG, nanosika ireo sakana fiarovana.
Nantsoina ny sampana vonjy taitra taorian'ny tatitra naratra maro tamin'ny alina fanokafana ny Fetiben'ny Mozika Astroworld.
Olona maro no nentina tany amin'ny hopitaly iray tao amin'ny faritr'i Houston, Texas taorian'ny naratra.
Nantsoina ny fiara mpamonjy voina, mpamono afo ary sampana vonjy taitra hafa taorian'ny tatitra naratra maro tamin'ny alina fanokafana ny fetiben'ny mozika hip-hop amidy any Houston, Texas.
Araka ny filazan'ny tompon'andraikitra ao amin'ny Departemantan'ny afo ao Houston, olona valo no maty ary maro hafa naratra tamin'ny fifanosehana nandritra ny fanafihana Fetiben'ny mozika Astroworld.
"Misy valo no voamarina fa namoy ny ainy amin'izao fotoana izao," hoy ny lehiben'ny afo ao Houston Samuel Pena tamin'ny mpanao gazety, ary nampiany fa amin'ny ankapobeny dia olona 23 no nentina niala teny an-toerana.
“Nanomboka nifanizina teo anoloan’ny lampihazo ny vahoaka, ary nanomboka nikoropaka ny olona”, hoy ny fanazavan’ny Lehiben’ny Faritra.
Lahatsary iray ao amin'ny media sosialy dia mampiseho ireo mpitsabo manao CPR amin'ny olona maromaro izay mandry amin'ny tany ivelan'ny sehatra, raha mbola mitohy ny mozika mafy ao ambadika.
Lahatsary iray hafa mampiseho andiana mpankafy manandrana miditra amin'ny alàlan'ny fiakarana fefy.
Nisy ihany koa ny vaovao voaray fa nisy mpanao rindran-kira misavoritaka nosamborin’ny polisy teo am-pidirana.
Ny tapakila 100,000 an'ny Astroworld Music Festival dia lany tao anatin'ny adiny iray nivarotra tamin'ny volana Mey. Mpankafy manodidina ny 50,000 no tonga nanatrika ny hetsika roa andro.
Ny filaharan'ny fetibe dia nahitana kintan'ny hip hop Travis Scott, Young Thug, Lil Baby, SZA, ary fisehoana tampoka nataon'i Drake, ankoatry ny hafa.